Manaova fahatsapana mety ary mamorona vaovao fijanonana herinaratra amin'ny LED Poster
FAHAMARINANA avo lenta ho an'ny TOERANA REHETRA
Ny petadrindrina LED EACHINLED dia novolavolaina tamin'ny haitao farany mba hanomezana azy profil malefaka sy malefaka kokoa. Namboarina tamina aliminioma maivana nefa maivana ary mora ampiasaina izy io, hahatonga ny endrik'ilay afisy manontolo milanja latsaky ny 35kg, ho mora entina sy mora hapetraka kokoa.
Ankafizo ny tombontsoa hijerena na handefasana ny playlist anao amin'ny horonan-tsary, audio na sary amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza misy afisy LED. Ampivoaro ny atiny nomerika amin'ny alàlan'ny haino aman-jery haino aman-jery matanjaka ao anaty amin'ny alàlan'ny WiFi na USB. Easy-to-manaraka menio eo amin'ny efijery dia manamora ny fandaminana ny atiny ary tsy mila fanahafana sarotra.
Ianao dia ho tia ny fahafahafainganana haingana amin'ny fanaovana servisy sy takelaka fanoloana modely avy eo aloha miaraka amin'ny andriamby fikirakirana. Misaotra ny teknolojia tsy misy pataloha tsy misy patanty amin'ny fampifandraisana ireo modules. Na izany aza tombony hafa, tsy miankina amin'ny afisy LED anao.
Ny Modul Smart futuristic dia ampidirina am-panaingoana ao anatin'ny rafitra afisy LED EACHINLED dia ny herin'aratra. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879768 '' Izy ireo miaraka no mamorona ny ivon'ny Smart Module ary manolotra sehatra fikirakirana horonantsary matanjaka, hiantohana ny fiasan'ny asa rehetra, amin'izay hiantohana ny fifandraisana tsy misy tohika toy ny asa fanaraha-maso ny efijery ary hamantatra hatrany ny asa.
Ny rindrambaiko alohan'ny fampidirana LED dia ahafahanao mifandray aminy amin'ny solosaina PC na Android avy amin'ny toerana tokana amin'ny alàlan'ny RJ45, WiFi, 3G, USB ary HDMI. Manamora ny famantarana ny seho misy anao sy ny fitantanana ny toerana misy anao toa ny famirapiratana sy ny tsy fitovizany. Alefaso mivantana avy amin'ny fitaovanao ny atiny, na solosaina finday, tablette na telefaona finday. Manaova fanaraha-maso sy fitantanana horonantsary amin'ny alàlan'ny Internet. Ny fahombiazanao dia nitombo noho ianao afaka mandefa ny Ny horonan-tsary lavitra dia tsy mila manana fitaovana mifehy eo amin'ny toerana na PC. minoa ary araho maso ny horonan-tsarinao avy amin'ny fiononan'ny biraonao.
⊙ >>>>>>> Jereo ny kinova feno amin'ny boky torolàlana PDF vokatra
P6 LED doka ivelany amin'ny varotra ho an'ny fiantsenana ...
Stadium Perimeter Series P10 ivelan'ny baolina kitra ...